दसैँ | Hamro Patro
जयदेश श्रेष्ठ - Oct 06 2016
दशैको मुखमा दिएको पहिलो किस्ता बापतको रकमले धेरै भूकम्प पिडतहरुले मुख मिठ्याएका छन्
हुनेको घरमा दसैँ आयो ,
नहुनेको घरमा दशा ।
कोहीको घरमा हर्ष बधाई ,
कोहीको घरमा लडाई ।
हुने खानेको रवाफ धवाफ,
नहुनेको छ याँहा पिडा ।
कोहीको भागमा माछामासु,
कोहीको भाग्यमा आँसु ।
छुट्याई दिन्छ ठुलो सानो ,
संस्कार रितीरिवाज हाम्रो ।
आज भोलि थाहा हुन्दैन । दशैको तयारी कसले कसरी गर्दछ । कसले कहाँबाट के ल्याउछ ? कसको घरमा के पाक्छ ? कसले गर्छ ? कसले ठुलो खसी काट्छ ? कसले नयाँ राम्रो लुगा लगाउछ ? यी यावत कुराहरू आफ्नो र अरूको बारे सोच्ने परिपाटीहरु हराउदै गए । तर पनि दसैँ आएको छ ।
दशैको आगमन सँगै धेरैको मन प्रफुल्ल नै देखिन्छ । समय बदलियो जमाना बदलियो , तर पनि दशैको नाममा इच्छा , आकांक्षा , मनोकामना पुरा गर्ने धोको बदलिएको छैन । नेपाली हिन्दुहरूको विशेष चाड दसैँ उपत्यका अन्य ठाँउहरुमा छरिएर बसेका नेपालीहरू सके सम्म आफ्नो ठाँउ पुर्ख्यौली नातागोताहरु सम्म पुग्छन् । दसैँ मनाउनको लागी , त्यसैले दसैँ एउटा मिलन बिन्दुको चाड बनेको छ । हरेक नेपालीहरू बिदेशीएको देखी बिछोडीएकाहरुलाई घचघच्याउन्छ यो दसैले , जस्तै कठोर मन लिएर छुट्टीएर बसेकाहरुलाई पनि उकुस मुकुस बनाउछ यो दसैले , सम्पती भएकाहरु मात्र हैन , सम्पती नभएकाहरु समेत गर्जो सापटीमा दसैँ मनाउने परिपाटी पहिले देखि नै थियो । आम नेपालीहरूको चाडवाड बिशेषत दसैँ तिहार मनाउनको लागी कमाई गर्नु पर्ने दुख गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । वर्ष भरीको कमाइले परिवारमा चाडवाड र दसैमा मिठो खानु राम्रो नयाँ लुगा लगाउन पनि हम्मे हम्मे पर्ने हाम्रो साँकूतीक रितिवाजलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौ । हिन्दु धर्म भनेकै सनातम धर्म हो । हामीले परापुर्वकाले देखी गर्दै आएको हुबहु चलनलाई अघि सार्दै आएका छौ ।